I-Apple Pay iza kufika ngokusemthethweni e-Itali ngomso | Ndisuka mac
Inkonzo ye-Apple Pay iza kufika e-Itali ngomso, ngokweendaba zasekhaya. Kusengqiqweni ukuba iApple iyaqhubeka nokwandiswa kwenkonzo yokuhlawula kusetyenziswa izixhobo zorhwebo kwaye kule meko ukuya e-Itali. Amanye amajelo osasazo elizweni athethathethane neevenkile ezininzi kule ndawo kwaye baqinisekisile ukumiliselwa kwendlela yentlawulo ka-Apple kwaye iindaba malunga nokuqaliswa kwayo sele zipapashiwe kodwa ngoku kubonakala ngathi sele ikufuphi kwaye Iya kuba ngomso xa abasebenzisi beApple Watch, i-iPhone okanye iMac ehambelana nenkonzo banokwenza iintlawulo ngeApple Pay.
Uhlobo oluphakathi apho iindaba zivela khona MacPost.it kwaye iqinisekisa ukuba ngolwesiThathu, nge-17 kaMeyi, iApple Pay izakufika ngokusesikweni kwilizwe liphela. Ngoku nje ukuba inkonzo iphehlelelwe ngokusesikweni -Apple cofa iqhosha- ifuna kuphela ukuba iivenkile zixhotyiswe ngazo iidathaphones ezixhasa i-NFC Kwaye iibhanki ziyajoyina inyathelo ukuze abasebenzisi abaninzi basebenzise amakhadi abo ngeApple Pay. Okwangoku, amanye amashishini sele evela kuluhlu lweeMephu zeApple kwaye enikezela ngenkonzo yeApple Pay.
Lo ngumba eSpain osinika ukubhabha kancinci nangona enye yezona zinto zikhulu zebhanki zixhasa olu hlobo lwentlawulo, sikwanofikelelo lokufumana ikhadi ngaphandle kwamaqhina neCarrefour, iAmerican Express kunye neRestaurant yeeTikiti, kukho Abasebenzisi abaninzi abafuna ukuba amaziko abo anike inkxaso ukuze kungabikho mntu uchukumisayo okanye enze nayiphi na intshukumo ngeeakhawunti zabo. Kule meko e-Italiya kubonakala ngathi iinkonzo ze-Apple Pay nazo ziya kuba zeebhanki ezimbalwa, ndingasathethi ke nge-UniCredit, ukongeza kwivenkile yevenkile enkulu exhasa iCarrefour neBoon eSpain. Ngayiphi na imeko, ziindaba ezimnandi kwaye kuya kufuneka sibone ubungqina ngomso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Pay izakufika ngokusemthethweni e-Itali ngomso